“ကိုယ်အဆင်ပြေဖို့ ပသကြရာဝယ်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ကိုယ်အဆင်ပြေဖို့ ပသကြရာဝယ်´´
Posted by ခင်ခ on Aug 31, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 19 comments
ဦးဆာမိ နောက်ကလိုက်သော ပိုစ့်တစ်ပုဒ်။
“ကိုယ်အဆင်ပြေဖို့ ပသကြရာဝယ်´´( ဦးဆာမိ နောက်မှ လိုက်သောပိုစ့်တစ်ပုဒ်)
ရှူး ​ပေါက်​ရင်​ မတ်​တပ်​ရပ်​မ​ပေါက်​ရတဲ့ ​တောင်းပန်​ပြီးမှ​ပေါက်​ရမယ်​တဲ့ …. ​မောင်​ဆာမိလည်း ပြန်​​မေးကြည့်​ပါတယ်​ ။ မတ်​တပ်​ ​ပေါက်​ရင်​ဘာဖြစ်​လည်းဆို​တော့ ​တောမှားတတ်​လို့တဲ့ …ကဲ ဟုတ်​ပါပြီ ။ ​တောမှားရင်​ ဘာဖြစ်​တတ်​လည်းဆို​တော့ … ​တောကိုင်​တတ်​တယ်​ တဲ့
အင်းး ကိုင်​မယ်​ဆို​တော့လည်း ​ကြောက်​​ကြောက်​
ဒါဆို ဘယ်​လို လုပ်​ရမလဲလို့ ​မေး​တော့ …. ​တော​ကျွေးရမယ်​ ပြီးရင်​ ရွာချ ရမယ်​တယ်​ ။သူ​တို့ စကားနဲ့​​ပြောတာပါ ။
​တော​ကျွေးတယ်​ဆိုတာက ​တောထဲ​ခေါစာပစ်​ပြီး ရွာချတယ်​ဆိုတာက ရွာပြင်​နားမှာ စတုဒီသာဘူ​ဖေး​ကျွေးရတာကို ဆိုလိုတာပါ ။
သူ့ဆီက ဓ​လေ့ထုံးစံ​တွေနား​ထောင်​ရင်း ​လှေဆိပ်​ကိုမ​ရောက်​မှီ ခင်​တန်း ​(​တောတန်း) ​လေးတစ်​ခုကို ဖြတ်​ရပါ​တော့တယ်​ ။
မျက်​နှာညှိုး​နေတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးနှစ်​ဦးရယ်​ ဦး​ဆောင်​လှုပ်​ရှား​နေတဲ့ ​ယောက်​ကျားကြီးသုံး​ယောက်​ရယ်​ လူငယ်​တစ်​စုရယ်​​ပေါ့ ။ သူ​တို့​ရှေ့​မြေပြင်​​ပေါ်မှာ​တော့ ငှက်​​ပျောရွက်​​တွေခင်းထားပြီး စတုဒီသာဘူ​ဖေး ခင်းထားပါ​တယ်​ ။ ခတ်​ညစ်​ညစ်​ဖန်​ပုလင်းနဲ့ထည့်​ထားတဲ့ ချဉ်​စုတ်​စုတ်​ ​တောအရက်​နှစ်​လုံးးး …….
ဝက်​သား ကိုလက်​​လေးသစ်​​လောက်​တုံးပြီး ချက်​ထားတဲ့ ဝက်​သသားဟင်းကတစ်​ပုံ….
ကြက်​နှစ်​​ကောင်​ကို ​ခြေမဖြတ်​ ​ခေါင်းမဖြတ်​ဘဲ ပြုတ်​ထားတဲ့ ကြက်​ပြုတ်​ ….
ကြက်​​သွေးလို့ ထင်​ရတဲ့ နီညို​ရောင်​ခတ်​ပျစ်​ပျစ်​ကတစ်​ခွက်​ ……
ဒူးယားစီးကရက်​က တစ်​ဗူး ……
နို့ဆီဗူး ​လေးလုံးချက်​​လောက်​ရှိမယ့်​ ထမ င်းတစ်​ပုံ ……
မောင်​ဆာမိတို့ ကြည်​​နေတုန်းမှာပဲ ​ခေါစာပစ်​ပွဲက စတင်​ပါ​တော့တယ်​ ….
အဖွဲ့​ခေါင်း​ဆောင်​ ​ယောက်​ကျားကြီးတစ်​​ယေက်​က ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ နယ်​ပြီး နှစ်​ပုံခွဲပြီး ပုံလိုက်​ပါတယ်​ ။
ပြီး​တော့ … ချက်​အရက်​တစ်​လုံးကို​မြေ​ပေါ်​လောင်းချလိုက်​ပြီး အရပ်​​လေးမျက်​နှာကို အရိုအ​သေ​ပေးပါတယ်​ ။
တစ်​ချိန်​တည်းမှာပဲ ကာယကရှင်​ မိန်းမကြီးက ပွစိပွစိနဲ့​တောင်းပန်​ပြီး လာလမ်းအတိုင်း ပြန်​သွားကြပါ​တော့တယ်​ ။ ( ဒါက ဂဇက်ရွာထဲက စာရေးဆရာကြီး ကိုဆာမိရဲ့ ပိုစ့်ထဲက ကောက်နုတ်တာပါ အပြည့်အစုံ ပြန်ဖတ်ချင်ရင် http://myanmargazette.net/184456 မှာ ၀င်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဗျ)
အဲဒီလို တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်စမ်း ဆိုသလို သူရွာ သူ့ဓလေ့တွေကလည်း ပစ်ပယ်လို့ မကောင်း ယုံရခက်ခက်တွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာရာဇ၀င်တွေမှာတောင်ရှိခဲ့ပါတယ် အတွင်း ၃၇ မင်း အပြင် ၃၇ မင်း ဆိုပြီးတော့လေ။ အဲဒီထဲမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားကာ ယုံကြည်စွာပူဇော်ပသနေကြတဲ့ တောင်ပြုန်းမင်းကြီး မင်းလေး။ တောင်ပြုံးနယ်မှာ အနော်ရထာမင်းက ဘုရားတည်တော့ အဲဒီနယ်က နယ်သူ နယ်သား ကလေးလူကြီးမကျန်ကုသိုလ်ပါအောင် လုပ်အားဒါနပြုကြစေလို့မိန့်ပေမယ် အုပ်နှစ်ချပ်မပို့ခဲ့လို့ ရွှေဖျဉ်းကြီး ရွှေဖျဉ်းလေး တို့ကို ရွှေဖော့လုံးနဲ့ဆုံးမစေဆိုတဲ့ဘုရင်အမိန့်ကို အသုံးချကာ ၀ါရင်းတုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်ခဲ့လို့ သေပွဲဝင်တော့ ရွှေဖျဉ်းကြီး ရွှေဖျဉ်းလေးကို တောင်ပြုန်းနယ်တစ်ဝိုက်အပိုင်းစားပေးလို့ နတ်ဖြစ်ကာ အဲဒီနယ်က ပူဇော်ပသခဲ့ရာက ဒီနေ့ထိ တောင်ပြန်းပွဲဆိုပြီး နှစ်စဉ်ပူဇော်ပသပွဲလုပ်နေကြတယ်။
အဲဒီလို နတ်သမိုင်းတွေ တောရွာဓလေ့တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ အခြေခံကဘာလဲဆိုတော့ မိမိစိတ် အခံ အကြောက်တရားကြောင့် ကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပေးရအောင် လုပ်ကိုင်မှုတွေမှာ အဆင်ချော်ရအောင် တောင်းပန် ရင်းက ပူဇော်ပသမှုဖြစ်လာတာပါဘဲ။ ဒါတွေဟာ အချိန်ကာလကြာတော့ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံလိုဖြစ်နေခဲ့တာလို့ တွေးမိပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ ယုံကြည်စွာပူဇော်နေမှုတွေရှိသလို တစ်ချို့ကလည်း မိမိအဆင်ပြေရေးအတွက် အလိုက် အထိုက် ပူဇော်နေမှုတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်ကငြင်းဆန် မပသလိုပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေက လုပ်ကိုလုပ်ရမှာမို့ လုပ်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိသပေါ့လေ။ အပေါ်မှာဖော်ပြတဲ့ ဂဇက်စာရေးဆရာ ကိုဆာမိပိုစ့်ဆို သူ့အရပ် သူ့ဒေသ အယူအရ အလိုက်အထိုက်လုပ်လိုက်ရတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။
နတ်သမိုင်းတွေလေ့လာကြည့်ပါ တောရွာတွေရဲ့ ပူဇော်ပသမှုတွေလေ့လာတဲ့အခါ ဟိုးရှေးရှေး တုန်းကထဲက ရှိခဲ့တဲ့ ၃၇ မင်းတို့ ပူဇော်ပသရတဲ့နတ်တွေတို့ထက် အခုခေတ်မှာ ပိုတိုးလာတာမျိုးမရှိကြဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ လည်းမေးကြစပ်စုဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ထင်မိပါတယ်၊ တကယ်မတိုးတော့တာလားလို့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအမေး ကို အခါခါတွေးမိရင်း အခုလိုတွေ့လာတယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ၃၇ မင်းတွေထက် တောရွာဓလေ့တွေ အရ ပူဇော်ကြတဲ့နတ်တွေထက် ပို၍ ပို၍ အစွမ်း ထက်သော သက်ဆိုင်လာလို့ ပူဇော်ပသမှုမလုပ်ရင် တောင်းပန်တိုးရှိုး အရိုအသေမပေးရင် လက်ငင်းအစွမ်း ထက်ကာ ဘ၀မကူးမှီဒုက္ခပေးတတ်သော ခေတ်သစ် ပူဇော်ပသစရာတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကာလ ခေတ်အနေနဲ့ န၀တလက်ထက်မှာပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူအတော်များများ အဲဒီထိုအမည်ကိုကြားရ ရင်ကို ကြောက်ခဲ့ကြတယ် မကြောက်ဖူးဆိုရင်တောင် ကင်းအောင်တော့တိုးလှိုးနေခဲ့ကြတယ် ထိုသူသည်က အခြားမဟုတ်ပါ “အဘ´´ ဟုဆိုသူပင်ဖြစ် ပေတော့ သည်။
ထိုအချိန်အခါတုန်းက “အဘ´´ ဆိုလျှင်ပင် ဘာမှန်းမသိ ထိပ်တိုက်မတွေ့ရဲကြ ပသခဲ့ကြရတယ်။ “အစိုးရ ၀န်ထမ်းများအားလုံးနီးပါး အစိုးရရုံးဌာနနှင့် ဆက်နွယ်ပက်သက်သူတွေအားလုံးနီးပါး ထို “အဘ´´ ကို အဆင် ပြေအောင် စိတ်မဆိုးအောင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးပေါင်းကြ ခြင်းကြီးခြင်းငယ်အသွယ်နဲ့ ပသကာ ကန့်တော့ရ လက်ဆောင်ပို့ရနဲ့ ထို“အဘ´´၏အရှိန်အ၀ါကလည်း အတော်ကြီးမားကာ နေရာယူခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမနည်း ဆယ်စုနှစ်အတော်ကြာပါပြီး၊ အခုလက်ရှိအချိန်ထိပါဘဲလေ။ မိမိမှာ ပြဿနာလေး အခက်အခဲ လေးမကြုံလိုက် နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရာဆိုင်ရာ“အဘ´´ကို စည်းကပ်လိုက်ရင်ဖြင့် ပွဲပြီးမီးသေဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ မနည်း ကြသလို ကိုယ် ပိုင်ရာဆိုင်ရာ“အဘ´´ကို ပသကာ စည်းကပ်သူကလည်း စီးပွားဖြစ် အကျိုးထွန်းက လောက စည်းစိမ်ခံစား ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးရှိခဲ့ကြတယ်လေ။ အဲ ထိုထို “အဘ´´ ကို မပသ ထော်လော် ကန့်လန့် တိုက် အတိုက်အခံပြုသူတွေကိုတော့ ခုန ရိုးရာကိုင်တယ် နတ်ကိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေထက် ပိုပြီး အဆသာ မယ်လို့ထင်တဲ့ ကိုင်နည်းမျိုးစုံတွေ အကိုင်ခံရလို့ တစ်ချို့လည်းဘ၀ပျက်မတတ်ခံစားခဲ့ကြပါတယ် လေ။ ထိုထိုသော “အဘ´´ တွေက မြန်မာပြည်မှာ ၃၇ မင်းမက ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရင် မှားမယ်လို့ တော့ မထင်ပါကြောင်း။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး ခဏလေးပါ ဖုန်းလာနေလို့နော်
“ကျွန်တော်က ……….. ရုံးကပါ၊ ကျွန်တော် အဘ က ဦးခင်ခ ကိုတွေ့ချင်လို့ အဲဒါကျွန်တော်တို့ရုံးကို ဘယ်အချိန်လောက်များ လာနိုင်မလဲလို့ သိချင်လို့ပါ´´
“အခုလာနိုင်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော် အဘ ကို ဦးခင်ခ အခုလာတွေ့မယ်ဆိုတာကို သတင်းပို့ထားလိုက်ပါ့မယ် ကျေးဇူးပါဘဲဗျ´´
“ဟုတ် ရပါတယ် အခုလာခဲ့ပါ့မယ်´´
ကဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကျွန်တော်အခု “အဘ´´ တစ်ယောက်ဆီသွားစရာရှိလို့ဗျာ ခွင့်ပြုပါအုံးနော်။
( ကိုဆာမိနောက်ကလိုက်လို့ ရေးလိုက်တာပါ )
ဟီ ဟိ အဘမှာတောင်မှ အဘကြီး အဘလေး ရှိသေးတယ်…
နတ်ကိုင်တာတော့ သေသေချာချာ မသိဘူး ဆရာခရဲ့…
အဘတို့ကိုင်လို့ ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝတွေက မရေတွက်အောင်ပါပဲ…
အဲသည့်အထဲမှာ ကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင် ထောက်ပြုတ် အဘကြီးက အဆိုးဆုံး…
န၀တရဲ့ နတ်ဦးသခင် အဘ ရှင် ဆိုတာ အဲဒီ ကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်က စခဲ့တာပါဘဲ ကိုကျောက်ရေ။
အောင်မယ်လေး အဘလို့မခေါ်ပဲ တခြားခေါ်လို့ကတော့ သေဖို့သာပြင် ဘာမှန်းကိုမသိဘူး တကယ်။
ရွာ ရဲ့ အဘများ ကိုလဲ ပူဇော်ပါတယ်၊ ပသပါတယ်။
ထော်လော် ကန့်လန့် မတိုက်ပါ။
အဘတို့ကိုင်ချင်ရင်တော့ သူကြီး ကိုသာ ကိုင်ပါ။ သူအမည်ကို က “ကိုင်” ပါ။
၃၇မင်းဆိုတာ.. ဟိန္ဒူနတ်တွေကို.. နာမည်ပြောင်းပြီး ကိုးကွယ်ခေါ်တာတဲ့…
မြန်မာပြည်ရောက်တော့.. ထပ်တိုးတွေနဲ့.. ခုံနေရာလုရင်း.. အတွင်း၃၇၊ အပြင်၃၇ ဖြစ်တဲ့အပြင်ကြားပေါက်တွေနဲ့.. နတ်ဖေါင်းပွမှုဖြစ်တာပဲ…။
.. နတ်တွေယူအက်စ်ကို.. မြန်မာပြည်ကနေအိပ်စ်စပို့လုပ်မယ်…
မြန်မာထုံးစံဓလေ့အရ.. နတ်တွေကိုနိုင်တာ.. “မင်း”ဗျ…
အဲဒါ.. မင်းတုန်း၊သီပေါအမျိုးတွေပြန်စု.. ပြန်တမ်းဖတ်ခိုင်းပြီး.. တောင်ပြုန်းပွဲတော်ဖျက်သိမ်း.. နတ်တွေ.. ပြည်ပအိပ်စ်စပို့.. ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရင်.. ဖြစ်နိုင်..မနိုင်…
မင်း ဆိုမှ ပေါလိုက်ရအုံးမယ် …
“မင်း” ဆိုဒါ ဂေါ့ဒ် … ဒဲ့ …
အီဂျစ်ဂေါ့ဒ် လို့ ပေါဒါဗျဲစ် …
သူ့ပုံဂျီး ဂလည်း ကျောင်းချရာဂျီး …. ဟီးးးး
ရုံးမှာ ကျိလိုက်မိဒါ စက်က လေးနေရဒဲ့ကျားဒဲ အိုက်ပုံဂျီးဂ ဘွားခနဲ ဆိုဒေါ့ မော်နီတာ ကို အညန်ပိတ်လိုက်ရဒေးဒယ် … ဟီးးးဟီးးး
သဂျီးလိုဘဲ .. ဟောဒီမှာ ဝီဝီ က ဆွဲထုတ်လာဒါ …. ကျိကျိ
သူကြီး သူများစီးပွာရေးဈေးကွက်ကိုလုချင်နေတယ်။ အဲ့ဒါ တိုးရစ် စိတ်ဝင်းစားတဲ့နေရာ။ ကာလ်ချာ နဲ့ လိုဖ်စတိုင် သပ်သပ်စီခွဲထားသင့်တယ်။ ကာလ်ချာ က ဒီခေတ်လူနေမှုနဲ့ မဝင်ဆန့်ရင် အကျိုးမရှိရင် မလိုက်နာပါနဲ့ ။ သူ့အတိုင်းလေးထားလိုက်ပါ။ စိတ်ဝင်စား သူများအတွက် သွားရောက်လည်ပတ်စရာနေရာ တစ်ခု အနေနဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ လိုဖ်စတိုင် ကိုသာ လိုက်လျောညီထွေ မြင့်တင်ပါ။
ညန်မာဒွေဂ ပိုကို ပိုလွန်းဒယ်လို့ ပေါရမယ် …
အတွင်းဂလည်း ၃၇ မင်းဒဲ့
အပြင်ဂလည်း ၃၇ မင်းဒဲ့
အတော်များဒဲ့ နတ်မင်းဒွေ …..
ဂလောက် ညန်မာပျီ ကဘာ့ အလယ်မှာ ညံ့နေဒါ ဒီနတ်တွေ ဒဂယ် မ မ,စ လို့ ဆိုဒါ သေဂျာဒယ် …
သူရို့ဒါ ဒဂယ် ချိ၊ ဒဂယ် မ,စ ရင် ညန်မာပျီဂျီး ကဘာ့ အလယ်မှာ တင့်တင့်တယ်တယ်ဂျီး နေမှာ .. ဗျဲစ် …
ဒါဂျောင့် ဒါဒွေ ဒဂယ်ချိရင်လည်း တောက်တုံးမကျဒဲ့ နတ်ဒွေဘဲ ဖစ်မှာ လို့ ထင်မိဘာဒယ် …. (အထင်)
အဘ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သူတို့တွေ ဘယ်တုန်းက မူပိုင်ယူသွားပါလိမ့်
ဘယ်သူတွေကများ စတင်တီထွင် သုံးစွဲခဲ့ပါလိမ့်နော်..
ယုံ ကြည် ဖို့ခက် တဲ့ ကိုး ကွယ် မှု
ယုံ ကြည် ဖို့အ ရမ်း ခက် တဲ့ ဖြစ် ရပ် မှန် လျှို့ ဝှက် ဆန်း ကျယ် ဇါတ် လမ်း တွေ ဆို တာ
ကျုပ် တို့ဘိ ရု မာ မှာ ပဲ ရှိ တာ မို့ 
ဂုဏ် ယူ တယ် ဗျား
ကျနော်လည်း နောက်က ထပ်လိုက်လာပါတယ်..။
ဒီလိုဗျ… မြန်မာပြည်မှာ အတွင်း ၃၇မင်း..အပြင် ၃၇မင်း အ၀န်း ၃၇မင်း ဆိုလား ပြောကြပါတယ်..
ဒါပေမယ့် တချို့ တွေက ပက်ပက်စက်စက်ကို နတ်တွေ ဆိုတာ အစိမ်းသေတွေ လို့ ပြောလိုက်ရင် ကြားရတဲ့ အခါ..ကျနော်က စိတ်မကောင်းဘူးဗျ..
ကျနော့် အသက်နဲ့ တွက်ကြည့်ရင်ပေါ့လေ..ဟို တောင်ပြုန်း မင်းညီနောင်ဆို ကျနော့် အဘေးရဲ့အဘေး မကတော့တဲ့အရွယ်တွေပါ..ကိုယ့်ဆွေမျိုး ကိုယ့် မိဘ ကိုယ့် အဘိုးအဘွားကို အစိမ်းသေလို့ ပြောခံလိုက်ရရင် ဘယ်လို နေမလဲ…ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းတာပါ.. ဘုရားရှင်ကလည်း သံသရာမှာ မတော်စပ်ဘူးတဲ့ ဆွေမျိုးမိဘမောင်နှမ မရှိလို့ ဟောထားတာလေ..။
သေခြင်းဆိုတာ.. ဘယ်လိုဘဲဆိုဆို တခုပါဘဲ.. အစိမ်းအကျက်ခွဲ နေရအောင်က ပဲမှုန့် မှ မဟုတ်တာ.. တူတူပါဘဲ..။
တခုတော့ ရှိတယ်.. သူများကို အစိမ်းသေလို့ ပြောတာကြားရင် စိတ်မကောင်းတတ်တဲ့ ကျနော်က….
အစိမ်းရောင်တွေ ၀တ်ပြီး နေရာတစ်ကာ ပွဲပြီး မီးသေတဲ့ သူတွေ…ကို
အစိမ်းသေ လို့ …။
သို့ မဟုတ်…. ချစ်စနိူးလေးနဲ့ ခေါ်မယ်ဆို..
အဘ တို့ 
မဆလ ခေတ်က ကာတွန်းလေးသွားသတိရမိတယ်။
သမဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို အသက်၇၀လောက် အဖိုးကြီးတစ်ယောက်က ပစ္စည်းသွားဝယ်တာကို ဆိုင်ဝန်ထမ်းက အဲဒါလူကြီးတွေအတွက်လို့ ပြောလို့ အဖိုးကြီးက ငါအသက်၇၀ရှိပြီ လူကြီးမဟုတ်လို့ ကလေးလား လို့ ဒေါကန်ပြီး ပြန်မေးတဲ့ ကာတွန်းလေး။ :D
န၀တခေတ်ကျတော့ ရာထူးကိုလိုက်ပြီး အဘ ခေါ်ကြတာ …..
တချို့ဆို အခေါ်ခံရတဲ့ အဘက အဘလို့ ခေါ်တဲ့သူထက် အသက်ငယ်နေတယ်တဲ့လေ။ :harr:
အိုက် အဘကိစ္စကို အခု ဂျာနယ်လစ်တွေ ဖွနေဒယ်နော်
lele kyi ရဲ့ မန့်ချက်ကိုတော့ ထိထိမိမိရှိသမို့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကကြိုက်ပါဘီသမို့ BC ပေးတယ်ဗျာ။
၀င်ရောက်ကာ မန့်ကြသူများ ကျေးဇူးဗျ။
ဦးခပို့စ်တွေ ကို သူကြီး စတစ်ကီ ပေးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သူ့ကို လာပြီး ဂလန့်တိုက် မန့်သွားတာကို BC ရွေးတယ်ဆိုလို့။
သေချာသလောက်ရှိမှာပါ။ ဒါပေသည့် မန်ဘာဝင်အဖြစ်က မောင်းမထုတ်သေးဘဲ ရေးခွင့်ရနေတာကိုဘဲ ကျုပ်ကသဂျီးကို ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်လေ ပြီးတော့ ကျုပ်ပိုစ့်တွေကလည်း စကစ်ကီပေးလောက်အောင် ကောင်းတာမျိုးလည်း မရှိလေတော့ပေါ့
နှစ်​​ပေါင်းများစွာ တံခါးပိတ်​ထားပြီး လူနဲ့သူနဲ့ အဆက်​အဆံမှ မရှိတာ ။ အ​တွေးအ​ခေါ် အယူအဆ ​ခေတ်​မမှီတာ အဆန်းတကျယ်​ မဟုတ်​ပါဘူး ။ ဝါးလုံး​ခေါင်းထဲ လသာတဲ့ ည​တွေ ကုန်​ပါ​စေ